भारतका विदेशमन्त्ती सुषमा स्वराज गतहप्ता २४ घण्टे नेपाल भ्रमणमा आइन् र फर्किइन् । तर अहिलेसम्म कसको निम्तोमा आइन्, कसैलाई थाहा छैन । महत्व केपी ओलीले दिए र गोप्य भेटवार्ता उनैसँग भयो, भेट्न त प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई पनि भेटिन् । राष्ट्रपतिलाई त अँगालो नै मारिछन्, भारतको रणनीति बुझिसाध्ये छैन । कहिले नाकावन्दी, कहिले अँगालो मारामार, के हो यो ?
प्रतिक्रिया जारी छ, प्रोटोकल मिचियो, कूटनीतिक मर्यादा थिचियो । भ्रमणले ओलीलाई बधाई प्राप्त भयो होला तर स्वराजको भ्रमण विवादास्पद बनेको छ । कूटनीतिक क्षेत्र र वृत्तमा त हंगामा नै खडा गरिरहेको छ ।
त्यसो त स्वराजले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरुका बरिष्ठ नेताहरुलाई मात्र महत्व दिएको देखिन्छ तापनि राजपाका र एमालेकाहरुसँग कुरा गर्दा चाहिंप ुरै प्रतिनिधि मण्डलका साथ भेट गरेकी थिइन् । साविकका प्रम शेरबहादुर भन्दा भविष्यका प्रम भनेर ओलीलार्य र उनका मन्त्रिमण्डलमा रहनसक्ने पार्टीहरु माओवादीका प्रचण्ड र फोरमका उपेन्द्र यादव र राजपाका नेताहरुलाई होटल सोल्टीमा नै बोलाएर आदेश दिएकी थिइन् । एकथरि भन्छन्, नेपालका भूपू प्रमहरु ओली र प्रचण्ड त्यसरी भेट्न जानु हुँदैनथ्यो । मर्यादाक्रमका हिसावले पनि त्यसो गर्न मिल्दैनथ्यो । अझ पार्टीका छोटेबडे जम्मै नेताहरुलाई लिएर एउटा मन्त्रीकहाँ जाँदा सार्वभौम मुलुक नेपालको गरिमा र हैसियतमा आघात पुगेको छ । अझ अर्काथरि भन्छन्, नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका विदेशमन्त्रीलाई लन्च दिनु उपयुक्त थिएन । यी भारतलाई महान ठान्छन् ।
कहाँ एउटा मन्त्री, अनि कहाँ प्रधानमन्त्री ? जेहोस्, यी भए सामान्य कुरा, सबैभन्दा महत्वपूर्ण त सुषमा स्वराजसँग गरिएको वान टु वान गोप्य वार्तामा के के कुरा भए ? त्यो नै महत्वपूर्ण विषय हो । सामान्य कुराहरु बाहेक यहाँका नेताहरु, जो दर्शनभेटका लागि होटेल सोल्टीपुगेको थिए, तिनले नेपाली जनता सामु खोलेकै छैनन् । अझ डरलाग्दा कुरा त केही मिडियाहरुमा आए अनुसार, विदेशमन्त्रीले नेपालको परराष्ट्र र सेना हामी चलाउँछौं भनिन् रे । यद्यपि यसमा विश्वसनीयता धेरै कम छ ।
तथापि यो असम्भव छैन । भारतले ०४६ सालमा राजा वीरेन्द्रका सामु यस्तै प्रस्ताव राखेको हो । जनआन्दोलन दबाईदिन्छु मान भनेकै हो । राजा राजा थिए र जनताका सामु झुके, भारतका सामु झुकेनन् । त्यस्तै प्रस्ताव अहिले भारतले राखेन भन्न सकिन्न । किनभने भारतीय विस्तारवादी नीति नै यही हो ।
वाम गठबन्धनलाई धक्का दिनका लागि अव भारतीय विस्तारवादले अरु के के खेल खेल्ने हुन् । भारतले पूर्वराजाको समेत दुरुपयोग गर्नसक्ने खतरा देखेका छन् केही विश्लेषकहरुले । चिनियाँ मोडेलको वाम गठबन्धनलाई छिन्नभिन्न पार्न भारतले कम्मर कसेर अघि बढेजस्तो छ । झुकेरै नेपाल धाउन थालेजस्तो छ ।
कांग्रेस कुना पसेको छ, किनारा लागेको छ । र अन्य राजनीतिक दलहरुमा हैसियत नभएको हुँदा पनि भारतले अनेक वितण्डापूर्ण रणनीति अख्तियार गर्न थालेको झल्का र झिल्काहरु देखिन थालेका छन् ।
सम्पन्न चुनावमा बहुमत हासिल गरे तापनि एमाले लगायत यहाँका राजनीतिक दलहरुको घट्दो लोकप्रियता अनि पूर्वराजाको बढ्दो लोकप्रियताले गर्दा भारतीय छातामुनी नभएसम्म नेपालीको अपेक्षा पूरा हुनसक्दैन भन्ने सन्देश दिन खोजेको पनि हुनसक्छ ।
अघि २०४६ सालको घटना जनताको मनमा ताजै छ । वीरेन्द्रले भारतको त्यस्तै प्रस्ताव नमान्दा पञ्चायत सफाया भयो र बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो । ब्ल्याकमेलिङ, फुटाउ र राज गर भारतको जन्मशिद्ध बानी हो । एकातिर राजनीतिक दलहरुलाई राजाको डर देखाउने र अर्कोतिर पूर्वराजालाई उडिसामा राजाकै हैसियतमा स्वागत सत्कार गरिदैछ । उडिसामा हिन्दु गुरुहरु, शंकराचार्यमात्र होइनन्, भारतीय नामी नेताहरका सामु नेपालका पूर्वराजाको विशेष अभिषेक गरिदैछ । हिन्दुत्वको लागि सहज देखिए पनि भारतको नीतिको कसीमा र हालैका भारतको चालढाल बिचार गर्दा यो हजम भइरहेको छैन ।
हिजो राजनीतिक दलहरुलाई देखाएर राजालाई तर्साइयो, आज राजालाई देखाएर दलहरुलाई तर्साइदैछ । लक्ष्यण शुभ छैन । लोकप्रियतामा स्थापित हुँदै गएका पूर्वराजालाई भारतको साथ चाहिएला, मुख्य निर्णायक शक्ति नेपाली जनताको समर्थन हो । जो जो भारतको बुई चढेर सत्ता र शक्तिमा पुगे, तिनको हविगत सबैले देखेकै छन् । माओवादीलाई प्रतिपक्षमा पुर्‍याएर कांग्रेसको समर्थनमा मधेसी दलहरु मिलेर ५ वर्ष ढुक्क भएर ओली शासन गर्नेवाला छन् भन्छन् दिल्लीका दूत बढी लाग्ने नेता अमरेशकुमार सिंह । केही दिन अघि बैंकक पुगेका ओलीले मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग भेट गरेको विषय पेरिसडाँडामा निकै खुल्दुलीको विषय बनेको देखिन्छ । यसैको गरुढ छायाँ माओवादी एमालेको एकीकरणमा परिसकेको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने विदेशीले खुलेरै खेल्न थाले, खुलेरै हस्तक्षेप गर्न थाले ।
ससाना कुरामा सडकमा आगो बालेर आन्दोलित हुने जनता र नागरिक समाज यो सबै परिदृश्य देखेर पनि राष्ट्रियताको सवालमा किन सडकमा ओर्लदैनन्, उदेक लाग्छ । यही कारण त राजनीतिक ठूला नेताहरु हामीले जे गरे पनि हुन्छ भनेर हेप्दै गएका र नेताहरु स्वीकारिरहेछन् ।